New Zealand waxay ku fureysaa USA maaraynta dhibaatada COVID-19
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » New Zealand waxay ku fureysaa USA maaraynta dhibaatada COVID-19
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka New Zealand • Jebinta Wararka Safarka • Jebinta Wararka Mareykanka • Caafimaadka Warka • News • Waajib ah • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Iyada oo qayb ka ah Tusmada Awoodda Caalamiga ah ee 'Soft Soft Index' - daraasadda cilmi-baarista ugu ballaadhan adduunka ee ku saabsan fikradaha astaamaha qaran, 75,000 jawaab-bixiyeyaasha dadweynaha iyo 750 oo ka socda dhagaystayaasha takhasuska leh ayaa la weydiiyay maaraynta Covid-19 by 105 ummadaha adduunka oo dhan.
Jawaab bixiyaasha ayaa la waydiiyay inay qiimeeyaan dadaalada umadaha ee ku aadan kobcinta dhaqaalaha, ilaalinta caafimaadka iyo samaqabka muwaadiniinta, iyo sidoo kale la shaqeynta masraxa caalamiga iyo bixinta gargaarka.
New Zealand iyo Mareykanka
Waxaa loo xirey inay tahay sheeko guul caalami ah oo ka dhalatay dagaalkii COVID-19, New Zealand waxaa qiimeeyay dad weynaha guud ahaan wadanka sida ugu wanaagsan wax uga qabtay masiibada, dhibcaha saafiga ah ee + 43%. Dhibcaha saafiga ah waa farqiga u dhexeeya 'si fiican u maareeyay' iyo 'si xun u maareeyay' jawaabaha saddexda tallaabo (dhaqaalaha, caafimaadka & samaqabka, iyo gargaarka iyo iskaashiga caalamiga ah).
Ra'iisul Wasaaraha Jacinda Ardern sida degdegga ah ee ay uga jawaabtay iyo sida hufan ee ay ula xiriirtay xallinta mashaakilka waxaa si ballaaran u ammaanay saxaafadda oo ay dadka adduunka oo dhan ka aqoonsan yihiin.
Dhamaadka kale ee muuqaalka, kaalinta ugu hooseysa ee 105 wadan ee adduunka, Mareykanka wuxuu leeyahay dhibco saafiya oo nadiif ah -16%, dhab ahaantii waa ka duwan tahay sida xoogga leh ee Mareykanku ugu sameeyay mitirrada kale sahankii Global Soft Power Index 2020. Jawaabtii madaxweyne Donald Trump ee aafada ayaa dhalisay khilaaf gudaha iyo dibeddaba, iyadoo madaxweynuhu marar badan diiday inuu aqoonsado oo uu ku dhaqaaqo darnaanta xaaladda. Xaaladaha ugu badan iyo dhimashada la xiriirta COVID-19 ee adduunka, adduunka ugu weyn uguna awoodda badan adduunka ayaa la kulmay dhaleeceyn iyo weydiin adag oo ku saabsan marxaladda adduunka.
Farqiga weyn ee udhaxeeya aragtida bulshada ee sida New Zealand iyo Mareykanka ay u maareeyeen aafada, waxay tusaale u tahay aragtiyada isbarbar dhiga ee labada qaran ee adduunka, oo ay horboodayaan ku dhowaad hoggaamiyeyaasha iskahorimaadka cad. Dhinaca kale, waxaan leenahay siyaasadaha furfuran, furfuran, iyo naxariista Ardern ee ka dhanka ah Trump inta badan dagaalka, ilaalinta, iyo go'doominta. Iyadoo Madaxweynaha la doortay Joe Biden uu diyaar u yahay inuu qabto talada dalka sanadka soo socda, indhaha oo dhami waxay u jeedsan doonaan isaga si uu u bilaabo dib u soo kabashada guud ahaan dalka.
Riwaayado niyad jab leh sumcad ku hoos jirta
Meelaha kale ee awooda liita ee reer galbeedka ayaa sidoo kale loo soo bandhigay aduunka si ay u aragto inta lagu jiro aafada, qaladaadkoodana kama aysan dareemin jawaabayaasha guud ee dadweynaha.
Faransiiska (+ 15%), Boqortooyada Ingiriiska (+ 14%), Isbaanish (+ 4%), iyo Talyaaniga (-1%), dhammaantood waxay diiwaan geliyaan dhibcaha ugu hooseeya ee saafiga ah. Gaar ahaan Boqortooyada Midowday waxay ku dhibtooday inay kala xaajooto dhibaatooyinka socda ee ka imanaya aafada, oo ay ku jiraan hoos u dhaca qandaraaska dhaqaale ee ugu adag ee la diiwaan geliyey - 20.4% bishii Abriil ee sannadkan, taas oo ka dhigeysa qaranka xaalad jahawareer ah. Boqortooyada Ingiriiska, Isbaanishka iyo Talyaanigu waxay hadda kujiraan 10ka ugu sareeya ee dhimashada ugu sareysa 100,000 ee adduunka, iyadoo Talyaanigu diiwaan gelinayo heerka dhimashada ugu badan 100,000 ee saddexda qofba 102.16.
Moodooyinka maareynta dhibaatooyinka?
Dowlado badan oo hodan ah oo sumcad adag ku leh in si wanaagsan loo maamulo, ayaa u soo baxay tusaale muuqda oo ku dayasho mudan marka la eego maareynta dhibaatooyinka indhaha bulshada, inta badan iyadoon loo eegeynin qaababka ay u wajahayaan aafada. Dhibcaha saafiga ah ee saafiga ah ee ka sareeya + 35% waxaa xusay wadamada sida Switzerland, Japan, Canada, Finland, Norway, Singapore, Denmark, South Korea, Australia, Austria, iyo Sweden.
Iswiidhan - oo ah ummad si gaar ah muran ugu jirtay jawaabteeda COVID-19, diidmada isfahamka qufulka iyo soo saarista xaddidaadyo dabacsan oo isdaba-joog ah iyo siyaasado lagu raadinayo xasaanadda xoolaha - ayaa leh dhib 8th dhacdooyinka ugu badan ee dhimashada 100,000 ee Aagga Dhaqaalaha Yurub. Si kastaba ha noqotee, dadweynaha guud iyo dhagaystayaasha takhasuska leh labaduba waxay ku qiimeeyaan Iswiidhan 13 sareth adduunka oo dhan si loogu maareeyo cudurka faafa dhammaan saddexda tallaabo.
Japan waxay diidday fursadaha dad badan oo filayey in qaranku noqon doono mid ka mid ah kuwii ugu xumaa bilowgii cudurka COVID-19 - taas oo ay ugu dhowdahay Shiinaha, magaalooyinkeeda ay dadku ku badan yihiin, iyo dadka waayeelka ah oo sii kordhaya. Laakiin waxay u muuqatay mid si guul leh u dhacday, kiisaska Coronavirus ee hooseeya iyo dhimashada iyo iyada oo dhaqaalihiisu aad uga sii fiicnaanayo.
Isbarasho la’aan ayaa carqaladeysa ummadaha
Isla mar ahaantaana, umado kale oo badan ayaan helin amaah ku filan dadaalkooda halka ay si cad ugu habboon tahay amaahdu. Dhibcaha saafiga ah ee Vietnam waa + 8%, in kasta oo duubitaannada layaabka leh ee COVID-19 iyo dhimashadu si aad u hooseysa u socdaan. Sheekadu waa isku mid Slovakia dhibcaha saafiga ah ee kaliya + 5%, laakiin kiisas aad ugayar marka loo eego dhigooda Yurub iyo barnaamij tijaabo ah oo asymptomatic ah oo guuleysta, oo wadamada sida UK ay rajeynayaan inay soo saaraan, si kastaba ha noqotee qaranku wuxuu aad ugu hooseeyaa hoos uga dhacay qiimaynta intii la filayay.
The UAE waa waddanka ugu sarreeya qiimeynta sahaminta ee Bariga Dhexe oo dhan, iyo 14th adduunka oo dhan, oo leh dhibic nadiif ah + 33%. Dadaallada umadda, laga bilaabo gargaarka caalamiga ah iyo horumarinta tallaalka, waxay la macno tahay in Imaaraadku u arko inuu la tacaallay aafada si ka wanaagsan dalalka deriska la ah, Qadar iyo Sacuudi Carabiya, oo leh dhibcaha saafiga ah + 29% iyo + 24% siday u kala horreeyaan. Heerarka hoose ee qarannimada, marka loo eego waddamada sida Switzerland, Danmark, iyo Austria waxay umuuqdaan inay yihiin cunsur xadidan, hase yeeshe.
Natiijooyinku waxay muujinayaan in si ummadduhu ay u samaystaan ​​aragti wanaagsan oo ku saabsan falalkooda, ay jiraan arrimo badan oo ka ciyaara marka loo eego hirgelinta siyaasaddooda. Sida la muujiyey, sumcaddu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa, sidoo kale is barashada. Umadaha sumcaddoodu sarreyso waxaa inta badan siiya amaah dheeri ah dadweynaha guud, halka kuwa helaya feejignaanta hoose ee warbaahinta ay si gaar ah uga hooseeyaan sahanka.
Guusha Jarmalka ee ay aqoonsadeen dhagaystayaasha takhasuska leh
Sida laga soo xigtay dhagaystayaasha takhasuska leh, markooda, Jarmalka ayaa ku soo baxay kaalinta ugu sareysa maadaama waddanka uu qabtay COVID-19 ugu fiican, oo leh dhibco nadiif ah 71%. New Zealand waxay gashay kaalinta 3rd dhagaystayaasha takhasuska leh oo leh dhibco wanaagsan oo wanaagsan oo ah 57%. Marka loo barbardhigo dadweynaha guud, dhagaystayaasha takhasuska leh waxay fahmeen oo ay aqoonsadeen caqabadda weyn ee Jarmalka ka haysatay muddadii uu socday aafada, ummad leh dad aad u tiro badan isla markaana xuduudo la wadaagay dhowr ummadood oo kale, si ka duwan New Zealand.
Inta badan, jawaabta dawladda Jarmalka iyo ra'iisal-wasaaraha Angela Merkel ee aafada ayaa si wanaagsan looga helay gudaha iyo dibaddaba tirooyinkuna waxay taageerayaan iyada oo waddanku si joogto ah u diiwaan gelinayo kiisaska ka hooseeya 100,000 marka loo eego dhiggooda Reer Galbeedka Yurub.
Shiinaha ayaa ugu bogaadin badan sida ay WHO u maareysay dhibaatada COVID-19
Hal su'aal oo dheeri ah ayaa lagu daray sahanka Global Soft Power Index oo la weydiinayo sida jawaab-bixiyeyaashu u arkeen waxqabadka Hay'adda Caafimaadka Adduunka. Guud ahaan, 31% jawaab bixiyaasha ayaa rumeysan in WHO 'ay sifiican ula tacaashay', halka 20% ay rumeysan yihiin in 'si xun wax looga qabtay'.
Jawaab bixiyeyaasha Shiinaha waxay ahaayeen kuwa lagu amaanay sida ay WHO u maareeysay dhibaatada, iyadoo jawaab celcelis wanaagsan laga helay + 53% jawaab bixiyaasha oo leh hay'addu 'si wanaagsan ayey wax uga qabatay'. Geesta kale, jawaabeyaasha Jabaan waxay ahaayeen kuwa ugu yar ee bogaadinta leh, iyadoo jawaab celcelis diidmo ah -51% ee jawaab bixiyayaashu ay yiraahdeen ururku 'si xun ayuu wax uga qabtay'. Waxa xiisaha leh, waxaa jiray dib u eegisyo isku dhafan oo laga sameeyay Maraykanka oo dhan, oo si gaar ah uga baxay WHO sanadkan. 35% jawaabeyaasha Mareykanka ayaa sheegay in WHO 'ay sifiican ula tacaashay', 26% 'ay si xun u maamushay' halka 33% ay ku jawaabeen 'isku dhafan'.